Waa Maxay Halista uu qabowgu leeyahey Maxaase ku dhaca?
Oogada markuu qabowgu ka bato waxaa la dareemaa in kuleeyl uu ku hayo
Qaboobuhu waa xilli ey dad badani jecel yihiin, hase yeeshee waa mid halis ku noqon kara nafsadda qofka. Waa sidee haddaba kolka ay oogadu qabowdo. Maxaase ku dhaca?.
Shaqada ayaad ku degdegeysaa, waxaad taagan tahay oo aad sugeysaa baskii, heer kulka cimiladuna waa qabow dhowr digrii ah. Waxaad soo iloowday koofiyaddii, abuu cumar iyo gacma geliskii.
Gacmihii iyo lugihii ayaa si tartiib ah u qaboobey. Waxaad bilowday gariir.
Xaaladdan oo kale midda ugu wanaagsan waxay tahay in koofiyad la xirto.
Kolka oogadu qabowdo xididdada dhiigga ayaa isku urura. Oogada ayaa isku difaaceeysa in dhiiggu aanu xiriir la sameeyn si aanu u qaboobin maqaarka qabow sida faraha iyo cagaha.
– Oogadu waxay middaa uga gol leedahay in aanu dhiig qabow gaarin wadnaha.
Waxay oogadu dhiigga ka joojisaa xubnaha aan muhiimadda sidaa u ballaaran lahayn, iyadoona xoogga isugu geenaysaa oorgannada udub dhexaadka ah, sida wadnaha, sambabbada, beerka iyo madaxa.
Oogadu waxay dhiig kulul ku waaridda madaxa si maskaxdu u shaqeeyso, madaxuna waa muhiim inuu kuleeylka helo si aannu dhiigguna ugu qaboobin sida oogada inteeda kale.
Heer kulka qabowga ee tobanka ah wuxuu kuleeylka oogadu 50% ka baxaa madaxa.
– Gaar ahaan ilmaha waxaa muhiim ah iney koofiyad xiran yihiin, maadaama madaxoodu ka wayn yahay kolka loo barbar dhigo jirmiga oogadooda.
Haddiise koofiyaddii la soo iloobey qabowgii oogadu halkiisii ayuu ka sii socon, mana ahan wax wanaagsan.
– Kolka qabowgu ka bato oogada, waxay dhumisaa awooddii ahayd inay dhiigga ka ilaaliso xubnihii qabowga oo ay horay uga joojisay dhiigga sida gacmaha iyo lugaha. Waxaa dib u furma qeybintii dhiigga ee guud, halkaasina oo dhiiggii kululaa uu dib u soo gaaro gacmihii iyo cagihii qaboobaa oo ey u qaataan iney kululaadeen. Waa marka uu qofku u macneeysto inuu kul hayo oo uu dharka iska bixiyo.
Sweden inta badan caadi kama ahan in qabow loo dhinto, hase yeeshee waxaa jira saddex kooxood oo halis u geli kara ammuurtaa:
• Dadka maskaxda ka xanuunsan ama aan dhimirka laheyn.
• Dadka cimilada dibadaha ka hela ee ku socdaala Fritidsutövare, oo mararka qaarkood shilal la kulmi kara.
• Iyo qofku markuu sakhraansan yahay – waana cidda ugu badan ee waxyeelladu ka soo gaarto cimilada qabow.
Habka loo badbaadin karo qof qaboobey?
– Dadka heer kulka oogadoodu u dhexeeyo 28-32 digrii waxaa loo baahan yahay in lagu dar yeelo cusbital si looga war qabo habka uu wadnihiisu u shaqeeyneyo, haddii loo baahdana looga caawiyo sidii loo howl gelin lahaa wadnihiisa, sida ay sheegtay caalimadda Agneta Brandt.
Haddii uu heer kulka oogada qofku hoos u gaaro 32-35 digrii waxaa la siin karaa cabitaan kuleeyl ah, hase yeeshee aan loo baahneyn in la siiyo haddii uu qofku miyir la’ yahay iyo sidoo kale in qofka la siiyo dhar iyo kulul iyo hooy.
– Haddii aannu hooy suurtagal ahayn ka gal goob aad dabeeysha kaga baxsan kartyo.